Accueil > Gazetin'ny nosy > Vono olona teny Tsiadana : Hiakatra fitsarana amin izay !
Vono olona teny Tsiadana : Hiakatra fitsarana amin izay !
Tamin ny 3 martsa 2017 dia nisy renim-pianakaviana, mponina etsy Tsiadana, Antananarivo fahatelo, fantatry ny maro amin’ny anarana hoe “Maman ‘i Tantely”. Raha niala vao maraina tao an-tranony hitaky ny volany tamina Rangahy eo amin Fokontany izy no fantatra farany. Tsy hita sy tsy niverina tao an-trano i Maman i Tantely. Indrisy fa maty ny harivan’iny raha nentina teny amin’ny Hopitaly Miaramila Soavinandriana “HOMI”.
Raha ny fanadihadiana fantatra tamin’izay dia ny tolakandron’io andro izy no nisy nahita teny amin’ny manodidina an’Ambatofotsy , izay efa tsy nahatsiaro tena ka niantso ny mponina ny Ben’ny tanàna, dia ireto no nitondra azy teny amin’ny tobim-pitsaboana ( CSB 2).
Teny an-dalana, raha nahatsiaro izy, no nilaza fa nomen’ilay olona nananany trosa sakafo. Mbola nahatsiaro tena Izy no nanome ny laharan’ny findain’ny vadiny sy rahavaviny. Ireo no nitondra azy teny amin’ny Hopitaly HOMI, ka teny andalana dia namoaka ra maintimainty ny vavany, Izany hoe poizina no nohaniny.
Nitory teny amin fitsarana ny vadiny sy anadahin’ny Maman’i Tantely, saingy nihisatra mihitsy ny raharaha. Tsy nisy fampiakarana fitsarana (procès) ary ilay ahiahiana nanapoizina dia tsy voaenjika. Nisy mihitsy fitsarana tokony nitsarana azy teny amin’ny ady heloka tamin’ny aogositra 2019, dia nahemotra aloha fa hoe tsy voaantso ilay Rangahy. Fa tamin’ny faharoa indray, dia ny antontan-taratasy fitoriana (acte d’accusation) no tsy hita !!!. Dia izao ny raharaha voasoratra amin’ny fandaharana anio Alatsinainy ao amin’ny Fitsarana sampana Ady heloka. Marihina fa misy ny ezaka ataon’ny rafi-pitsarana ankehitriny, mba hanafainganana izay raharaha mihantona, indrindra fa nisy famoizan’aina. Dimy taona katroka izay ! Enga anie tsy hihemotra intsony.